I-Visa yaseUganda | IVisa eUganda | natvisa.com
Isicelo se-Visa sase-Uganda kwi-Intanethi
Urhulumente wase-Uganda wazise inkqubo elula yokufumana i-visa ngenkqubo ye-elektroniki. Ngokungafaniyo ne-visa yesiqhelo, inkqubo ye-eVisa ikwi-intanethi ngokupheleleyo. Kanye ukusuka ekufakeni isicelo se-visa ukuyifumana, abahambi akufuneki baye naphi na. Yonke imfuneko yokwenza kuqala kukumisela uhlobo lwevisa abafuna ukuyifaka, bafumane ifom yesicelo kwiwebhusayithi karhulumente, bayigcwalise ngokuchanekileyo, bangenise uxwebhu olufunekayo kwaye bahlawule umrhumo wevisa. Kwisithuba seentsuku ezimbalwa ifom yesicelo iya kuqwalaselwa kwaye i-eVisa iya kuthunyelwa nge-imeyile. Inkqubo ibilula kubo bonke abo bantu abangafuni kujongana nengxaki yokutyelela i-embassy okanye ukuqhuba inkqubo ye-visa ende.
Iindidi zeVisa yaseUganda
Abantu abafaka isicelo se-eVisa eUganda kufuneka babe nala maxwebhu alandelayo - ikopi ekhutshiweyo kwiphepha leenkcukacha zakho zencwadana yokundwendwela, ifoto yomenzi-sicelo, ikopi efundwe kwiphepha lokugqibela lepaspoti (ukuba ikhona) kunye nesimemo ileta (ukuba ikhona)
Abafakizicelo kufuneka benze idilesi ye-imeyile xa besenza isicelo se-eVisa. Le id ye-imeyile iya kubakhonza ngeendlela ezininzi njengokufumana isaziso okanye ukufumana i-eVisa yokugqibela xa kusetyenzwa.
Okona kubaluleke kakhulu ukuba abafaki-zicelo kufuneka babe nepasipoti efanelekileyo xa besenza isicelo se-eVisa naxa beseluhambeni. Ipaspoti kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Ukugonyelwa iCesina eMthubi
Nawuphi na umntu oya eUganda kufuneka afumane ugonyo lweYellow fever. Kufuneka banikeze isatifikethi sokugonya ngelixa ufaka isicelo se-eVisa.
I-Visa yase-Uganda evunyiweyo
I-eVisa lelona xwebhu lubaluleke kakhulu ekufuneka abahambi balunike igunya lesikhululo seenqwelomoya ekufikeni eUganda. Olu xwebhu lokuhamba kufuneka luvunywe.
Emva kokufika eUganda, abahambi kufuneka bangenise noxwebhu lwabo lokuhamba, okt, ipasipoti esemthethweni. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ipasipoti ebonisiweyo iyafana naleyo yayisetyenziselwa inkqubo yokwenza isicelo.
Iinkcukacha zeVisa yaseUganda
Yintoni i-eVisa yaseUganda?
Iphepha mvume lokuhamba eUganda luxwebhu olubalulekileyo ekufuneka umntu ngamnye abe nalo xa etyelele ilizwe. IRiphabhlikhi yaseUganda yazisa ngenkqubo yekhompyuter yokufumana i-visa ngoJuni ka-2016, ngenjongo yokwenza kube lula ukuba abahambi kwihlabathi liphela bafumane imvume yabo yokuhamba ngaphandle kwengxaki enkulu. Abantu abanenjongo yokhenketho, batyelele usapho kunye nabahlobo, injongo yezonyango okanye iholide eqhelekileyo banokufaka isicelo se-eVisa yabakhenkethi eUganda.
Inkqubo yokufumana i-eVisa yenziwe lula kakhulu. Yonke inkqubo yenziwe kwi-intanethi. Oku kubandakanya onke amanyathelo asuka ekufakeni isicelo sevisa ukuze uyifumane. Ngenkqubo ye-eVisa, abahambi ngoku banokufaka isicelo sokundwendwela kwiindawo ezahlukeneyo ngaphandle kokundwendwela uMzi woZakuzo.
Ungasifaka njani isicelo se-Visa yase-Uganda ekwi-Intanethi?
Inkqubo yokufumana i-eVisa inamanyathelo ama-3 kuphela. Abafakizicelo kufuneka kuqala bagqibe ngohlobo lwevisa abafuna ukuyifaka isicelo. Nje ukuba kuthathwe isigqibo, kufuneka balandele la manyathelo anikwe apha ngezantsi:
Gcwalisa ifom yesicelo: Abafakizicelo kufuneka baqale inkqubo yokwenza isicelo ngokugcwalisa ifom yesicelo. Akukho mfuneko yokuba beme emgceni ukuze bafumane ifom. Kufuneka nje batyelele iwebhusayithi karhulumente kwaye bakhuphele le fomu kule ndawo. Okulandelayo, iindwendwe kufuneka zigcwalise ifom ngolwazi oluchanekileyo kwaye zingenise.
Ukungeniswa kwamaxwebhu: Emva kokuba ifom igcwalisiwe, abafaki-zicelo kufuneka bangenise amaxwebhu afunekayo. La maxwebhu kufuneka atshekishwe emva koko alayishwe kunye nefom yesicelo. Abafaki-sicelo kufuneka baqinisekise ukuba ukuskena kucacile.
Hlawula umrhumo weVisa: Inyathelo lokugqibela lenkqubo ye-visa yenza intlawulo kwisicelo sevisa. Abafakizicelo banokukhetha ukusebenzisa ikhadi lebhanki okanye ikhadi lekhredithi ukuhlawulela umrhumo wevisa. Kuya kuthatha kuphela imizuzu embalwa ukugqiba inkqubo yokuhlawula.
Emva kokuba umfaki sicelo elandele amanyathelo ama-3, isicelo sabo siya kuthunyelwa ukuba siqhubekeke. Kwiintsuku nje ezimbalwa, baya kufumana i-eVisa yabo evunyiweyo kwi-imeyile ye-id yabo. Kuyacetyiswa ukuba ukhuphele kwaye ufumane ushicilelo kolu xwebhu lwemvume yokuhamba. Abahambi baya kucelwa ukuba bayibonise abasemagunyeni xa befika eUganda.
Imiyalelo yabahambi abafaka isicelo se-eVisa yabakhenkethi baseUganda
Abantu mabachaze ngokucacileyo utyelelo lwabo phambi kokufaka isicelo se-eVisa. Kuya kufuneka benze isicelo sevisa ngokufanelekileyo.
Iindwendwe kwiVisa yabakhenkethi azivunyelwa ukuba zithathe umsebenzi ohlawulelwayo okanye ziqale ishishini ngexesha lokuhlala kwabo elizweni.
Yintoni i-eVisa yabakhenkethi baseUganda?
I-eVisa yaseUganda luxwebhu olubalulekileyo olusebenza njengemvume yokuhamba yabantu abaceba ukuya eUganda besuka kwilizwe langaphandle.
Lisebenza ixesha elingakanani iVisa yam yabakhenkethi?
Nje ukuba yamkelwe, i-eVisa eya eUganda isebenza iintsuku ezingama-45.
Ngawaphi amaxwebhu afunekayo ukuze kugqitywe inkqubo yokwenza isicelo sevisa?
Abafaki-zicelo baya kuyidinga-ikopi ekhutshiweyo kwiphepha lakho leencwadana yokundwendwela, ifoto yomenzi-sicelo, ikopi efundwayo yephepha lokugqibela lepasipoti (ukuba ikhona) kunye neleta yesimemo (ukuba ikhona).
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka ebonisiwe xa ufika eUganda?
Abafakizicelo kufuneka babonise i-eVisa yabo evunyiweyo kunye noxwebhu lokuhamba xa befika eUganda.
Loluphi ugonyo ekufuneka luthathwe ngaphambi kokundwendwela i-Uganda?
Iindwendwe kufuneka zigonyelwe i-Yellow Fever ngaphambi kokundwendwela i-Uganda. Abantu kufuneka nabo babonise uxwebhu olo ukungqina okufanayo.
Mangaphi amangenelo aya kuvunyelwa nge-eVisa yaseUganda?
Abahambi baya kuvunyelwa ukungena kube kanye nge-eVisa e-Uganda
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ipasipoti ihlangane nayo?
Ipaspoti kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 kwaye ibe nephepha elinye elingenanto.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo ukuhlawula umrhumo we-eVisa waseUganda?
Abafakizicelo banokukhetha ukusebenzisa ikhadi lokuthenga ngetyala okanye ikhadi lebhanki ukuhlawulela umrhumo we-eVisa wase-Uganda.
Undwendwe luya kuyifumana njani ingcaciso ngobume bevisa?
Ababhenkethi banokufumana ulwazi malunga nenqanaba labo le-visa kwi-imeyile ye-imeyile. Kulapho abafaki-zicelo baya kufumana lonke isaziso.
Abafakizicelo baya kufumana i-eVisa yabo nge-imeyile kubo, abanokuthi bayikhuphele kwaye bayiprinte.